Dowladda oo xabsiga dhigtay Askar ku xadgudbay Saxafiyiin. | Somsoon
Home SAXAAFADA Dowladda oo xabsiga dhigtay Askar ku xadgudbay Saxafiyiin.
Dowladda oo xabsiga dhigtay Askar ku xadgudbay Saxafiyiin.
Waxaa xabsiga la dhigay labo askari oo ka tirsan Ciidamada Booliiska kuwaas oo si aan sharci waafaqsanayn ula dhaqmay suxufiyiin ku guda jiray hawl maalmeedkooda, waxayna Madaxtooyada Soomaaliya ballan qaaday in ay sharciga lala tiigsanayo askarta xiran.
Askarta xiran ayaa fal ka baxsan sharciga kula kacay Suxufiyiin ka tirsan warbaahinta Al Jazeera kuwaa oo marayay isgoyska soobe meel ku dhaw.
Halkaan ka akhriso qolaaka uu baahiyay Agaasimaha warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed:
Article horeEmergency Relief Pouring into Flood-Stricken Somalia, VOA
Article socoda Dowladda Yemen iyo kooxda gooni u goosadka dalkaas oo gaaray heshiis nabadeed.